Sanaadiiqdii MH17 oo la wareejiyay - BBC Somali
Image caption Sanduuqa madow ee diyaaradii Malaysia laga lahaa oo la wareejinayo
Xoogagga gooni u goosadka ee ka dagaallama bariga Ukraine ayaa ku wareejiyay labo sanaadiiqda madow ah khubaro ka socota Malaysia, sanaadiiqdaasi oo ay lahayd diyaaradii Malaysia laga lahaa ee Khamiistii ku dhacday Bariga Ukraine.
Xoogagga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xabbad joojin goobta ay diyaaradda ku dhacday.
Mar sii horreysayna, xoogagga ayaa sii daayay tareen sida meydadka inta badan 298-kii qof ee diyaaradda saarnaa.
Dhanka kale golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si buuxda isugu raacay qaraar ku baaqaya, in baarayaasha caalamiga ah ay si aan faragalin iyo xanibaad lahayn uga howlgalaan, goobtii ay ku burburtay diyaaradii Malaysia Airlines, ee lagu soo riday Bariga Ukraine.
Safiirka Ukraine u fadhiya Qaramada Midoobay, Yuriy Sergeyev, ayaa soo dhaweeyay qaraarka.
Cadaadis la saarayo xukuumada Ruushka
20 Luulyo 2014
Maydka diyaaradii Malaysia oo la qaatay
19 Luulyo 2014